कोरोना स’ङ्कटको बेलामा फेरी अर्को वि’पत, कुखुराको मासुमै एस्तो भेटिएपछी सबैलाई सा’वधान रहन चे’तावनी ! « गोर्खाली खबर डटकम
कोरोना स’ङ्कटको बेलामा फेरी अर्को वि’पत, कुखुराको मासुमै एस्तो भेटिएपछी सबैलाई सा’वधान रहन चे’तावनी !
कोरोना सङ्कटको बेलामा फेरी अर्को विपत, कुखुराको मासुमै एस्तो भेटिएपछी सबैलाई सावधान रहन चेतावनी ! कुखुराको मासुमा कोरोना भाइरस भेटिएको छ । ब्राजिलबाट चीनमा आयात गरिएको कुखुराको मासुमा कोरोना भाइरस भेटिएको हो ।
चिनियाँ राष्ट्रिय टेलिभिजन सीसीटीभीले उहु सिटीस्थित रेष्टुरेन्टमा कुखुराको मासुमा कोरोना भाइरस भेटेको जनाएको छ ।
सेन्जेन शहरको स्थानीय प्रशासनले विज्ञप्तिमार्फत् उक्त कुराको जानकारी गराएको हो ।
विज्ञप्तिमा फ्रोजन कुखुराको पखेटामा कोरोना भाइरस भेटिएको जनाइएको छ । रेष्टुरेन्टमा कुखुराको मासु खाएकाहरुमा कोरोना संक्रमण समेत भेटिएको हुनसक्ने जनाइएको छ ।यो पनि, कोरोनाभाइरस संक्रमित संख्या वृद्धि भएपछि काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिनेका लागि दिइने पास पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ।
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दाहिने शंख जसले जिवनमा धन, सम्पती र खुसी मिल्ने छ !